ထိုအစီအစဉ်ကို စီးပွားရေးအတွက် မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့တွင် စက်ဘီးစီးသော ယဉ်ကျေးမှု ရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Bikes In Yangon Campaign အဖွဲ့က စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စောကပလူစိုး နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာနေသည့် စီးပွားရေးကြောင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့်Trafigura က ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၂ သန်းတန် လောင်စာဆီနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့သိုလှောင်ရုံကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Puma Energy နှင့် ၎င်း၏ ပြည်တွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Asia Sun.
ပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီမရရှိသေးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရရှိထားသည့် ဒီမိုကရေစီမှာ ပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီမဟုတ်သေးပဲ တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းနေဆဲဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လန်ဒန်တွင် မေ ၉ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေသစ်ကို ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းက ယေဘုယျအားဖြင့် အပြုသဘော တုံ့ပြန်လိုက်ကြသည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်လာစေရန် နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်စရာများ ရှိနေသေးသည်ဟုလည်း ပြောကြားကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေက ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်.
အစိုးရမီဒီယာအသုံးပြု မဲဆွယ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ NLD ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် ပါတီ ၁၂ ခုက တိုင်ကြား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင်များသည် အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသည့် မီဒီယာများကိုအသုံးပြုပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ခဲ့သည်ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ခုက စွပ်စွဲလိုက်ပြီး ယင်းလုပ်ရပ်များကို အရေးယူပေးရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ တိုင်ကြားလိုက်သည်။
အဆိုပါဆုမှာ လန်ဒန်မြို့တော်က ပေးအပ်သည့် အဆင့်အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ချီးမြှင့်လေ့ရှိသည့်ဆုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။